अर्थमन्त्रीका लागि अन्तिम मौका – Chitwan Post
सरकार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने संघारमा आइपुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा बजेट प्रस्तुत नगर्दै विभिन्न क्षेत्रमा चर्चा–परिचर्चा सुरू भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तेस्रोपटक बजेट प्रस्तुत गर्ने संघारमा आइपुग्दा पनि आफूलाई सफल अर्थशास्त्री भएको विश्वास भने दिलाउन सकेका छैनन् । उनले यसअघि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विगतका अर्थमन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेजसरी नै पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने महत्त्वाकांक्षा राखेका थिए । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारणसँगै बेरोजगारीको अन्त्य तथा खाद्य सुरक्षाका आधारमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिने कार्यक्रम र योजना स्वाभाविक नै लाग्छन् । तर, अब पनि पुरानै अर्थमन्त्रीले जसरी नै कर्मकाण्डी बजेट आयो भने त्यसले अर्थमन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने छ भने बजेट पारित हुने बेलासम्म उनी पदमुक्त हुने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने यही नै अन्तिम मौका हो । किनभने, डा. खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद समाप्त भएको करिब तीन महिना पुग्नै लाग्दा जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने किसिमले बजेट ल्याउन नसके उनको पुनः नियुक्ति हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
बजेट खासगरी सरकारको एक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको आयव्यय विवरण नै हो । बजेटले सरकारले एक वर्षमा के–के कार्यक्रम गर्छ भन्ने देखाउँछ । यो सत्तारुढ पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज पनि भएकाले यो बजेटसँग सरकारको सफलता÷असफलतासमेत जोडिएको हुन्छ । डा. खतिवडा अनुभवी, राष्ट्र बैंकबाट अवकाशप्राप्त पूर्वकर्मचारी, पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष भइसक्दा पनि न राजनीतिज्ञको छवि बनाउन सकेका छन् न त सफल अर्थशास्त्रीको । आर्थिक क्रियाकलापमा मुख्य स्थान रहेको निजी क्षेत्रको विश्वास पनि उनले जित्न सकेका छैनन् । अहिले बजेट ल्याउनु आफैँमा कठिन त छँदैछ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । केही महिनायता कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिँदा निजी क्षेत्र बेस्मारी थला परेको अवस्था छ । सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछि निजी क्षेत्रले राहत खोजेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतमात्रै योगदान दिने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका छन् । जब कि, पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा लाखौँ व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । विकास बजेट लक्ष्यअनुरुप खर्च नहुनु, लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन नहुनु, आयातमा गिरावट हुँदाहुँदै पनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमात्रै दुई प्रतिशतमा खुम्चिनुजस्ता कारणले अर्थमन्त्री लक्ष्यमा असफल भए । यद्यपि, अर्थमन्त्रीका लागि तेस्रो बजेट अन्तिम मौकाका रुपमा आएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै सङ्कट भइसक्दा मह¤वाकांक्षी बजेट ल्याएर होइन, सङ्कटग्रस्त क्षेत्रलाई उकास्न राहत तथा प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउनु श्रेयष्कर हुन्छ । सरकारले भर्खरैमात्र ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्र तथा कमजोर आय हुनेका लागि सहयोग गर्नेभन्दा पूरै कर्मकाण्डी र पुरानै ढर्राबाट आएको छ । यही आधारमा बजेट आउने हो भने न निजी क्षेत्रले राहत पाउँछन् न त न्यून आय हुनेकै लागि सहयोग नै पुग्नेछ । अबको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरुका लागि उत्साह ल्याउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेजस्ता विषयमा जोड दिनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेटका कार्यक्रम उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आउन सक्यो भनेमात्र अर्थमन्त्रीको कार्यकालका साथै बजेट फलदायी हुने देखिन्छ ।